सार्वजनिक शौचालयमा ताला, कुनाकानी खोज्दै बटुवा Setokhari ::. News Portal
शुक्रबार, फागुन २१, २०७७ ०६:२८:४७
विजय मल्ल 2077-10-10
नेपालगन्ज १० माघ : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले लाखौं खर्चेर बनाएको आधुनिक सार्वजनिक शौचालयमा यतिबेला ताला लागेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३, रामलीला मैदान नजिक रहेको मासुमण्डी छेउमा बनाइएको आधुनिक सार्वजनिक शौचालयमा ताला लाग्दा सर्वसाधरणले सास्ती भोग्नु परेकोछ ।
उक्त शौचालय प्रयोगविहीन हुदैँ गएपछि ताला मात्र लगाइएको छैन गोदाम घर बन्न पुगेको हो । जसका कारण सर्वसाधारण खुल्ला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य भएकाछन् ।
सार्वजनिक शौचालयको समुचितरुपमा प्रयोग र यसको प्रभावकारिताका विषयमा नेपालगन्ज नगरपालिकाले लापरबाही गरेपछि लाखौं रुपैयाँमा निर्मित यस्ता सार्वजनिक संरचना प्रयोगविहिन हुदैँ गएकोछ ।
आधुनिक शौचालय निर्माण भएसंगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शम्शेर राणाले एक कार्यक्रमकाबीच शौचालयको उद्घाटन समेत गरेका थिए । उनले सो बखत सार्वजनिक शौचालयका विषयमा गम्भीर भएको बताउँदै सर्वसुलभ र प्रभावकारी शौचालय व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका प्रयासरत रहेको बताएका थिए ।
शौचालयको प्रयोग र ब्यवस्थापनका लागि भन्दै उपमहानगरले मासुमण्डीका एक मासु ब्यवसायीलाई सञ्चालनका लागि भाडामा समेत दिएकाको थियो । तर, ती ब्यवसायीले यतीबेला शौचालयमा ताला लगाएका छन् भने आफ्ना नीजि कामका लागि शौचालयमा सामान भण्डारण गरि गोदाम घर बनाएका छन् । उनले शौचालय भित्र खसी, बोका, मासु काट्ने सामग्री, बोरा, साइकल लगायतका सामान शौचालय ठेक्का लिएका ब्यक्तिले राख्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक शौचालयमा ताला लगाएपछि सो क्षेत्र भएर हिड्ने बटुवा शौच लाग्यो भने कुनाकानी, पर्खाल अनि अब्यवस्थितरुपमा पार्क गरिएका गाडीको आड लिदैं शौच गर्न बाध्य छन् । यो सौन्दर्यताले यतिबेला नेपालगन्जको सिंगो प्रशासनलाई गिज्याइरहेकोछ ।
ब्यवस्थित र सफा नगरको परिकल्पना बोकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको लाज छोपिएको छैन । यस्तो दृष्यले आम सर्वसाधरणलाई सास्ती भएकोछ । सार्वजनिक विदा बाहेकका अरुदिन सो क्षेत्रमा रहेका ब्यवसायीहरु तथा बटुवा शौच गर्नका लागि नजिकै रहेको नापी कार्यालय तथा सहकारी कार्यालयको शौचालयमा सुटुक्क छिर्ने गर्छन् ।
उक्त सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनको जिम्मा लिएका ती मासु ब्यवसायीले महिला र पुरुष दुवैतर्फको शौचालयमा दिनभर ताला लगाउने गरेका छन् । ब्यवसाय गर्नुपर्ने भएकोले शौचालयमा ताला लगाउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘शौचालय गर्न कतिखेर आउँछन भन्दै दिनभर कुरेर बस्न नसकिने भएकाले ताला लगाउन बाध्य भएको’ ति ब्यापारीले निर्धक्कसँग भने ।
शौचालयमा ताला लागेपछि सर्वसाधारण खुल्ला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य भएका छन् । शौच गर्नका लागि बनाइएको शौचालयमा ताला लगाइएपछि खुल्ला ठाउँमा शौच गर्दै आएका त्यहाँका ब्यापारीले दुखेसो पोखे ।
नजिकै शौचालय छ, तर सधैँ बन्द हुन्छ । शौच गर्नका लागि पो शौचालय बनाइएको होला । बन्द गरेर राख्नका लागि त होइन होला । केही भनौं उनले ब्यक्तिगत रिसिबी राख्छन् । नभनौं शौचालय भएर पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । मासु ब्यापारीले बताए ।
यो त एउटा प्रतिनिधी घटना मात्र हो । नेपालगन्जको धम्बोझी चोक राष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंकको बिचमा बनाइएको नेपलाकै पहिलो अत्याधुनिक शौचालय समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । प्रयोग विहीन बन्दै गएको यो शौचालय समेत जिर्ण बन्दै गएकोछ ।
यकातिर बाँके खुल्ला दिशामुक्त घोषणा भईसकेको छ । तर, नगरपालिकाभित्रै प्रयाप्त सार्वजनिक शौचालय नभएको आवाज उठिरहदाँ लाखौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका यस्ता शौचालयमा ठेकेदार र नगरपालिकाको उदासिनताले आम सर्वसाधरणको शौचालयमा पहुँच हुनसकेको छैन ।
यो त उदाहरण मात्र हो उपमहनागरपालिका क्षेत्रमै यस्तो अवस्था विभिन्न वडामा रहेको छ । घरमा शौचालय बनाएका बाँकेका अधिकांश नागरिक शौचालय प्रयोगका बारेमा अझैंपनि अनभिज्ञ छन् । कतिपय शौचालयमा पराल, दाउरा र विभिन्न घरायसी सामान राखेका छन् । कतिपय घरधुरीमा त शौचालय हेर्दा ‘स्टोर रूम’ जस्तै छन् । कतिपय शौचालय जीर्ण छन् । मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि अभाव छ ।
बाँकेलाई खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने होडबाजीमा केही सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले शौचालय बनाएका थिए । तर, यसरी बनाईएका शौचालय प्रयोगमा छन कि छैनन्, यसको सदुपयोग भयो/भएन भनी अहिलेसम्म कसैलेपनि अनुगमन गर्न र बुझ्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् । यद्यपी, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र सरोकारवाला कुनैपनि निकायले अहिलेसम्म यस्ता शौचालयको अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन् ।
काँग्रेसले सदनमा रेफ्रीको भूमिका खेल्नुपर्छः नेता शाही
संसद् ब्युँतियो अब के हुन्छ ?
सुरक्षा घेरामा नौबस्ता औधोगिक क्षेत्र शिलान्यास
मापसे चेकजाँचमा बाँके ट्राफिक